पोखरा प्रिमियर लिग आज देखि सुरु : विराटनगर र पोखराबीच खेल – JanaSanchar.com
जयबाबा ईट्टामा बिहानै गोली चल्यो, मेनेजर हुसेनको मृत्यु
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ
काम गर्न सकिदैन भने किन कुर्सीमा बस्ने ? : झलनाथ खनाल
जनताको अपमान कहिलेसम्म ? परशुराम कोईराला
जनप्रदर्शन र जनसभाको प्रचारप्रसारलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र व्यापक बनाउने निर्णय
दुई-तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि नेपाली रास्ट्रियता र जनजिविका झन् कमजोर बन्दै गैरहेकोमा पोखरेली चिन्तित
प्रहरीले ब्यानर च्यतिदिएपछि आज फेरी पी एन गेटमा नयाँ ब्यानर
रुपन्देहीका जिल्ला न्यायधिवक्ता निरौला घुस लिदालिदै पक्राउ
१२ वर्षीया गंगा चेपाङ गर्भवती, पेटमा सात महीनाको गर्भ
अन्यौलग्रस्त नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन : दोबाटोमा नेकपा – घनश्याम भुसाल
पोखरा प्रिमियर लिग आज देखि सुरु : विराटनगर र पोखराबीच खेल
संबाददाता : आस्था नेपाली	प्रकाशित मिति: (२०७५ कार्तिक ९, शुक्रबार) १२:२४
पोखरा, सर्वाधिक पुरस्कार राशिको क्रिकेट प्रतियोगिता पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) शुक्रबारबाट पाेखरामा शुरू भएकाे छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल घरेलु टोली पोखरा पल्टन र विराटनगर टाइटन्सबीच हुनेछ । शरद भेषवाकरको कप्तानीमा पोखरा र सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा विराटनगर मैदानमा उत्रँदै छन् ।
विजेताले २७ लाख पाउने
पिपिएल नेपालमा आयोजित टी–२० क्रिकेटमा सर्वाधिक धनराशिको प्रतियोगिता हो । यस प्रतियोगिताको विजेताले २७ लाख र उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । योसँगै प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र उत्कृष्ट बलरहरूलाई भिजी अटोमोबाइल्सबाट सुजुकी जिक्सर १५५ सिसी मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ । प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचले १० हजार रुपैयाँ र ५ हजार बराबरको विभिन्न गिफ्टह्याम्पर पाउने आयोजक क्विन्सका प्रबन्ध निर्देशक छुम्बी लामाले जानकारी दिए ।
पोखरामा दुई विदेशी
पोखरा पल्टनले १६ सदस्य खेलाडीमध्ये दुई विदेशी पनि समावेश गरेको छ । पोखराले अक्सनबाट १२ खेलाडी भित्र्याएको थियो । २ विदेशी र २ स्थानीय खेलाडीसहित पोखराले एक कार्यक्रमबीच टोली सार्वजनिक गरेको छ । पोखराले युएईका मोहम्मद नभिद र भारतका रविइन्दर सिंहलाई यसै साता आबद्ध गरेको थियो । स्थानीय खेलाडीका रूपमा दीपेश खत्री र सुमन घिमिरे रहेको टोलीका व्यवस्थापक सुमनराज कार्कीले बताए । भारतका खेलाडी आइसकेका छन् भने युएईका आउँदै छन् ।
यस्ता छन् ६ फ्रेन्चाइज
प्रतियोगितामा ६ सहरका ६ फ्रेन्चाइज बेस टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पोखरा पल्टन, हुलास काठमाडौं रोयल्स, चितवन राइनोज, विराटनगर टाइटन्स्, बुटवल ब्लास्टर्स र एक्पर्ट धनगढी ब्लुजले उपाधिका लागि प्रतिसपर्धा गर्नेछन् । पोखराका भेषवाकर, काठमाडौंका ज्ञानेन्द्र मल्ल, चितवनका पारस खड्का, विराटनगरका सन्दीप लामिछाने, बुटवलका सोमपाल कामी, धनगढीका दीपेन्द्रसिंहले मार्की तथा कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
(२०७५ कार्तिक ९, शुक्रबार) १२:२४ मा प्रकाशित
सुनसरी जिल्लाको सोनापुरस्थित जयबाबा ईट्टामा आज बिहानै गोली चलेको छ । गोली प्रहारबाट उद्याेगका म्यानेजर ५४ वर्षीय फिदा हुसेनको मृत्यु भएको छ । दुहबी - ९ छाताबेलीमा रहेको जय बाबा इँटा उघोगमा ड्युटीमा.....
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका.....
दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहको छ । अर्कोतिर पार्टी एकीकरण.....